“Waxaan doonayaa inaan markale ciyaaro kubbada cagta.”. Abou Diaby – Gool FM
“Waxaan doonayaa inaan markale ciyaaro kubbada cagta.”. Abou Diaby
Byare September 11, 2017
(Europe) 11 Sebt 2017. Laacibkii hore ee kooxaha Arsenal iyo Marseille ayaa qiray inuu ku fikiray inuu gabi ahaan isaga fariisto kubbada cagta balse uu iminka eeganayo inuu dib ugu soo laabto ciyaaraha.
Diaby ayaa mar u soo ifbaxay sida mid ka mid ah rajada kubabda cagta ee Fransiiska balse waxaa la haray oo ficiisa ka reebay dhaawacyo isdaba yaal.
Sikastaba laacibka muslimka ah isla markaana aadka u codka macaan markuu aqrinayo Qur’aanka Kariimka ayaa sheegay inuu isha ku hayo ku soo laabashada garoomada kubbada cagta.
“Waan ku fikiray inaan ciyaaraha ka fariisto, balse gabo gabada waa inaan doonayo inaan shaqeeyo inay nafsadeyda soo kabato isla markaana aan ciyaaro kubbada cagta markale,” 31-jirka ayaa sidaa u sheegay Canal Football Club.
“Waxaan bilaabi doonaa shaqadeyda diyaarinta waxaan heystaa saddex ama afar bilood si aan dib ugu soo celiyo jirkeyga heerka ay tahay inuu ahaado.”.
Frank De Boer oo laga xayuubiyay xilka Crystal Palace 4-kulan uun kaddib
Rugcadaagii hore ee Chelsea Didier Drogba oo ka hadlay sida uu u arko Morata